भाउजु लाई ब्ल्याकमेल गरेर खुब गरियो – Ekathmandunepal
Homeब्लगभाउजु लाई ब्ल्याकमेल गरेर खुब गरियो
२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:१६ ekathmandu Nepal ब्लग 0
साथीहरू म ‘Dirty Dimag’ को प्रशंसक नै हुँ । आज म मेरो आफ्नो सत्य घटना सुनाउन जाँदैछु । यो घटना २ बर्ष अगाडीको हो । मेरो दाइको विवाह ६ बर्ष अगाडी भएको थियो, मेरो भाउजू मेरै उमेरको हुनु हुन्थयो यसैले चाडै नै हामी देवर भाउजू भन्दा मिल्ने साथी भएका थियौ । मेरी भाउजू गोरी राम्री तथा मिलेको जीउ भएकी हुनुहुन्थ्यो तर पनि मैले कहिल्यै भाउजूलाई नराम्रो दृष्टिले हेरीन । मेरो दाइ र भाउजू काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो म चही प्राय गाउँ मै बस्थे । दाइहरु बस्ने घरमा सबै एउटै परिवार जस्तै थिए । घरबेटी पनि आफ्नै जस्तो व्यबहार गर्दथे । घरबेटीको जेठो छोरो राहुल मिलनसार र पढाईमा राम्रो थियो त्यसैले उ कहिले काहि दाइको कोठामा आएर छोरालाई पढ्न सिकाएर बसथ्यो । राहुल १९ बर्ष जतिको थियो गोरो राम्रो केटा थियो । मेरो दाइ जागिरे हुनुहुन्थ्यो भने भाउजूको दिनचर्या चाही कोठा मै बित्थ्यो ।
यस्तैमा दाइ एकपटक अफिसको कामले १५ दिनको लागि उपत्यका बाहिर जानु भएको थियो दाइ बाहिर जानुभएको २ दिन पछि मेरो काठमाडौँमा काम परेकोले आएँ मैले तर मेरो काम १० दिन पछि मात्र हुने भयो यसैले म दाइको कोठा मा जाने विचार गरे । जानु अघि मैले भाउजूलाई फोन गरे भाउजूले फोन उठाउनु भयो र आफु बाहिर घुम्न निस्केको फर्कन अलि समय लाग्ने बताउनु भयो । म दिउसो घाममा कहाँ जानु बरु दाइ कै कोठा तिर गएर कसैकोमा बसौला भन्ने सोचेर उतै तिर लागे तर म त्यहाँ पुग्दा घर सुनसान थियो सायद सबै बाहिर गएकाले होला तल कोठाहरू सबैमा ताला लागेका थिए र म भाउजू यिनीहरु संगै बाहिर निस्कनु भएको रहेछ भन्ने सोच्दै माथी घरबेटी बस्ने तिर लागे त्यहा पनि कोही थिएन अनी म आज बाहिरै बस्नु पर्ने भयो बन्ने सोच्दै दाइ बसेको फ्ल्याटमा गए तर त्यहाँ ढोकामा ताला लगाएको थिएन ।
म ढोका नजिक पुगेर ढोका ढकढकाउन आँटेको थिए मैल भित्रबाट भाउजू र कोही केटा मान्छेको आवाज सुने । अनि भाउजूले मलाई बाहिर छु भनेर कोठामा नै हुनु र भित्र केटा मान्छेको पनि आवाज सुन्नाले मलाई शंका लाग्यो, यसैले मैले आवाज ननिकाली चेक गर्ने विचार गरे । मैले यताउता हेरे नजिकमा एउटा टुल देखे अनि बिस्तारै त्यो टुल तानी त्यसमा चढेर ढोकाको भेन्टिलेसन बाट चिहाएर हेरे भित्रको घटना देखेर म एकपटक त छक्क परे भित्र खाटमा भाउजू आफुले लगाएको म्याक्सी कम्मर सम्म सारेर उत्तानो परेर सुत्नु भएको थियो र घरबेटीको छोरो राहुल चाही अर्धनग्न अवस्थामा भाउजूको पूतीमा मुख गाडेर चाटिरहेको थियो । म यो देखेर पहिला त छक्क परेर हेरिरहे नि केहि बेरमा खल्तिबाट मोबाइल निकालेर त्यो दृष्य खिच्न थाले राहुलले केहीबेर पूती चाटे पछि अब भाउजूले उसलाई उठाउनु भयो, अनि आफुपनि उठेर कण्डमको प्याकेट खोली उसको लिङ्गमा लगाइदिनु भयो ।
त्यसपछि भाउजू फेरी उत्तानो परेर सुत्नु भयो र राहुललाई आफु माथी चढ्न भन्नु भयो । राहुल भाउजू माथी चढ्यो, अनि भा
उजूले उसको लिङ्ग समाएर आफ्नो पूतीमा सिधा पारेर राहुललाई लिङ्ग भित्र छिराउन भन्नु भयो । उसले आफ्नो लिङ्गलाई भित्र धकेल्यो र बिस्तार मच्चिन थाल्यो तर ४/५ धक्का दिदैमा उसको माल झरेछ क्यार उ सिथिल भैहाल्यो । अनि भाउजूले उसलाई आफु माथि बाट हटाउन थाल्नु भयो । म चाही हतार हतार टुल बाट ओर्लिइ टुललाई पहिलाकै ठाउँमा राखी दिएँ र बरन्डाको साइडमा लुके केही समयमा राहुल भाउजूको कोठाबाट निस्किएर यताउता हेर्दै आफ्नो फ्ल्याट तिर लाग्यो । भाउजू चाही नुहाउनको लागि बाथरूममा छिर्नु भयो , अनि म पनि लुकेको ठाउँबाट भित्र तिर आएर सिढीमा बसिरहे केही बेर मा भाउजू नुहाएर पेटिकोट मात्र लगाएर बाहिर निस्कनु भयो ।
भाउजूको स्तन पेटिकोटबाट बाहिर फुत्केला झै भइरहेका थिए । मलाई त्यहाँ देखर छक्क पर्दै लाज माने झैँ गरी कतिखेर आउनु भयो भनेर सोध्नु भयो । मैले भर्खर आइपुग्दै छु भनि जवाफ दिए । भाउजूले मलाई कोठामा बस्न भन्नु भयो र आफु कपडा लगाउन जानु भयो । केहिबेरमा भाउजू कुर्था सुरुवाल लगाएर आउनु भयो तर मेरो आँखामा चाही भाउजूको अघिको रुप झलझली आइरहेको थियो । अनि भाउजू मेरो लागि खाजा बनाउन थाल्नु भयो म चाही टिभी हेर्दै आज चान्स मार्ने योजना बनाउन थाले भाउजूले खाजा तयार गरे पछि दुवै जना गफ गर्दै खाजा खान थाल्यौ । खाजा खाइसके पछि भाउजू तपाई बस्दै गर्नु म छोरोलाई लिन स्कुल जान्छू भनी बाहिर निस्कनु भयो । म चाहि मोवाइलमा भाउजूको आघिको सेक्स क्लिप हेर्न थाले । यो हेरे पाछि मलाई खपि नसक्नु भयो र हस्तमैथुन गर्न थाले । १५ मिनेट जोडले हल्लाएपछि मेरो ज्वाला शान्त भयो ।
केहि समय पछि भाउजू छोरोलाई लिएर आउनुभयो । छोरो मलाई देखेरे खुसी भयो अब भाउजू खाना बनाउने तयारीमा लाग्नु भयो म चाही छोरोलाई गृहकार्य गराउन थाले । खाना तयार भए पछि भाउजूले खाना खान बोलाउनु भयो र हामी किचेनमा गयौ । खाना खाईसकेर म र छोरो टिभी हेर्न थाल्यौ, भाउजू पनि भाँडा धोइसकेर आउनु भयो । यतिबेला सम्ममा छोरो निदाइ सकेकोले भाउजू छोरोलाई सुताउन थाल्नु भयो, म चाही ल्यापटप चलाउन थाले । भाउजू छोरोलाई सुताइ सकेर कपडा बदलेर आउनु भयो । यति बेला भाउजूले सुत्दा लगाउने पातलो खालको म्याक्सी लगाउनु भएको थियो । म चाही भाउजूमा आज कामले उन्मत्त भएकी देवी रती देखि रहेको थिए । भाउजू म नजिक आएर बस्नु भयो म चाही भाउजूको अघिको मोबाइलमा भएको भिडियो कपी गरेर ल्यापटपमा राख्न लागे ।
भाउजूले यो देखेर बाबु यो के भिडियो हो हेरौन भन्नु भयो मैले पनि राम्रो मौका पाएझै लागेर हुन्छ भन्दै भिडियो प्ले गरिदिए । भाउजू भिडियोमा आफ्नै यौन दृष्य देखेर बोल्न नसकी अवाक हुनु भयो । अनी बल्ल डराउदै बाबु यस बारेमा कसैलाई नभन्नु ल, म बरू तपाईले जे भने पनि मान्छु । आज राहुलले मलाई वाइन खान कर गर्यो अनी संगै बसेर हामीले वाइन खाएको, अनी खाऐको तालमा चल्दा चल्दै यस्तो भयो । प्लिज बाबु कसैलाई नभन्नु ल भन्नु भयो । मैले पनि मौकाको फाइदा उठाउदै भने हुन त हुन्छ तर मेरो एउटा शर्त छ । भाउजूले के शर्त भनेर सोध्नु भयो, मैले तपाई म संग पनि सेक्स गर्नु है त । भाउजूले भन्नु भयो “म त तपाईको आफ्नै भाउजू हो, म कसरी तपाई संग सेक्स गर्न सक्छु ।“ मैले भने “त्यो राहुल संग गर्न हुने म संग चाही किन न हुने ? झन तपाई मेरो भाउजू भए पछि म यस बारेमा कसैलाई भन्दा पनि भन्दिन अनी कसैले शंका गर्लाकी भन्ने डर पनि हुदैन । गर्नु हुन्न भने म यो भिडियो अरुलाई देखिदिन्छु पनि, तपाई आफै विचार गर्नुहोस ।“ अब भाउजू बाध्य भएर अप्टरो मानी मानी स्विकृती जनाउनु भयो । अब म ल्यापटप छोडेर भाउजूलाई चलाउन थाले । मैले म्याक्सी बाहिरै बाट भाउजूका स्तन समाएर मल्न थाले ।
भाउजूका स्तन ठुला र नरम थिए । अनि बिस्तारै भाउजूको म्याक्सीलाई कम्मर तिर फर्काउन थाले । भाउजूका सेता तिघ्रा देखेरै मेरो हतियार ६ इन्चको भइहाल्यो । म्याक्सीलाई फर्काएर मैले भाउजूको पेन्टी पनि फुकाली दिए । भाउजुले पूतीको सबै रौं हटाएर एकदम सफा बनाउनु भएको रहेछ । अनी म भाउजूको पूती चलाउन थाले । मैले भाउजूको पूती च्यातेर टिसीलाई जिब्रोले चलाउन थाले । भाउजूको पूतीबाट मुल फुट्न थाल्यो । अघि सम्म अप्ठेरो मानि रहनु भएको भाउजू अब मजा लिन थाली सक्नु भएको थियो । त्यसपछि मैले आफ्नो प्यान्ट र कट्टु खोले, मेरो ६ इन्च लामो लिङ्ग देखेर भाउजूले तपाईको हतियार त तपाईको दाइको भन्दा पनि ठुलो रहेछ भन्नु भयो । मैले भाउजूलाई जिस्काउदै भने “अनि राहुलको भन्दा नी?” । भाउजूले भन्नु “भयो उसको त झन सानो
छ त्यो त वाइनको शुरमा ऊसले चल्दा चल्दै गरेको हो । त्यही पनि पहिलो पटक भएर होला चाडै फल भयो, मलाई त मजा नै भइन नि ।“ मैले अब म मज्जा दिउलानी भन्दै भाउजू माथी चढेर मेरो हतियार भाउजूको पूती भित्र छिराउन थाले । भाउजूको पूतीमा धेरै पानी आइसकेकोले मेरो लिङ्ग सजिलै भित्र छिर्यो । अब म बिस्तारै मच्चिन थाले, केहीबेर मच्चिए पछि भाउजूले म माथी आँउछु ल भन्नु भयो । अनी मैले मच्चिन रोकेर लिङ्गलाई पूतीबाट बाहिर निकालेर खुट्टा पसारेर पछाडी हात टेकेर बसे । भाउजूले उठेर आफ्नो सबै कपडा खोलेर मेरो काखमा बसेर लिङ्गलाई समाई पूती भित्र छिराउनु भयो । अनी तल माथी गर्न थाल्नु भयो, म चाही भाउजूको स्तन खेलाउन लागे । केही बेर गरे पछि भाउजूले म त गले अब तपाई नै गर्नुहोस भन्नु भयो । त्यसपछि मैले त्यत्तिकै भाउजूलाई पल्टाएर आफु चाहि माती चढे, अनी फेरी जोड संग मच्चिन लागे । भाउजूको पूती पानीले भरिएकोले कच्याक काच्याक आवाज आइरहेको थियो । केही बेरको मच्चाई पछी मेरो लिङ्गले भाउजूको पूती भरी छादिदियो । म केही बेर भाउजू माथी नै सुतिरहे, केही बेरमा हामी फेरी अर्को यौन लडाईको तयारीमा लाग्यौ ।
त्यस रात मैले भाउजूलाई ४ पटक बिभिन्न पोजिसनमा चिके, भाउजूले पनि मेरो चिकाईको खुब मजा लिनु भयो । मैले भोलि पल्ट घर फर्कने योजना बनाएको थिए तर त्यो १० दिन म त्यही बसे र मैले प्रत्येक रात भाउजूलाई चिकेर बिताए । त्यसपछि पनि मैले मौका मिलाएर भाउजूलाई बेला बेलामा चिक्ने गर्थे । अहिले मेरो पनि विवाह भई सक्यो तैपनि हामी मौका मिल्ना साथ यौन खेल खेल्ने गर्छौ ।
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (753)
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (571)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (281)
फिल्ममा आउँनु अघि यस्ता थिए नेपाली चलचित्रका चर्चित… (179)
सेक्स पावर” तुरुन्तै अत्यधिक मात्रामा बढाउने घरेलु औषधी (150)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,263)